Izindaba - I-22nd Hortiflorexpo IPM Beijing Septhemba 16-18 2020
I-22nd Hortiflorexpo IPM Beijing Septhemba 16-18 2020
Ithimba labathengisi likaZhengchida belikhona kwabangu-22nd IHortiflorexpo IPM Beijing Exhibition ngoSepthemba 16-18th, 2020. Umcimbi wokuvula ubungumbukwane omuhle.
Ngenxa ye-convid-19, lena yi-1st nombukiso kuphela ebesihambele kuwo kulo nyaka, kepha kungabizwa ngempumelelo enkulu. Sivakashelwe ngabathengi abaningi basekhaya abavela emafektri okugunda, abathengisi be-aftermarket, nezinkampani ezihweba. Iningi labathengi bangaphandle bavela eningizimu-mpumalanga ye-Asia, njengeKorea, iJapane neThailand. Kuzo zontathu izinsuku, idokodo lethu beligcwele abantu futhi abafana bethu bahlala bematasa.
Sikhombise imikhiqizo yethu emisha kanye namakhathalogi. Amakhasimende amaningi akhombise intshisekelo emikhiqizweni yethu yezinhlamvu zokugunda utshani, ama-brush cutter blades, ama-edger blades, ama-hedge trimmer blade nemimese ye-flail. Bakhangwe yimikhiqizo yethu eyenziwe ngezifiso, izinhlobo ezahlukahlukene zamamodeli, i-MOQ ephansi nobuchwepheshe, abanye babo baze benza isivumelwano nathi etendeni. Ekupheleni kombukiso, sesithole amakhadi ebhizinisi angaphezu kwekhulu.
Siphinde sahlangana namakhasimende ethu amaningi athembekile amadala. Sikhulume ngama-oda, sabelana ngempumelelo entsha, saxoxa ngamasu amasha, futhi sabelana ngemibono ngamathrendi wemboni. Ngenxa yamakhasimende ethu amahle, ukuthi iZhengchida ingaba nokukhula okuzinzile okuqhubekayo kule minyaka. Sizoqhubeka nokuhlinzeka ngosizo lobungcweti nokwenza ngcono insiza yethu ukugcina ubudlelwane bebhizinisi besikhathi eside nobungani.
Ngiyethemba abantu abavela emazweni ahlukene bayahlangana ukuze balwe neConvid-19, futhi lesi sifo siyanyamalala esikhathini esizayo. Ngemuva kwalokho singaqhubeka nokuhambela eminye imibukiso, njengeSpoga + Gafa, GIE EXPO, neCanton Fair ekhaya naphesheya, ukwethula ama-mower blade ethu kubantu abavela ezindaweni ezahlukahlukene zomhlaba. Sikholelwa ukuthi ukuthembela kukhwalithi yethu evelele, insizakalo, isipiliyoni kanye nezinga lentengo, sizokwaziwa futhi sithandwe ngamakhasimende amaningi.